Apple Music Ọkpụkpọ na Devices ịgba
Apple Music Format na Devices Ịgba
Nkebi nke 1: Apple Music Ọkpụkpọ na ịgba nke ngwaọrụ
Nkebi nke 2: Gịnị music formats Apple ngwaọrụ support?
Nkebi nke 3: Best music Downloader -TunesGo - na Ntụgharị ka mp3 na-akpaghị aka
Apple Music bụ a amamiihe music gụgharia ọrụ nke na-enye gị nweta ọtụtụ nde tracks na gị iOS ngwaọrụ na-arụ ọrụ na ndenye aha ndabere. Nke a music gụgharia ọrụ na oru-adịbeghị anya na ebe ọ bụ na mgbe ahụ, ọ ka dọtara ọtụtụ nde ndị ọrụ si cross ụwa. The n'elu ikpo okwu Otú ọ dị akwado naanị ole na ole nke music formats nakwa nwere ịgba ka ọnụ ọgụgụ na ụdị ngwaọrụ na ike ga-eji iji nweta ya. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-amụta ihe niile banyere formats akwado na ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ na ike ga-eji maka ya.
Ọ dị mkpa ịmara na Apple Music akwado naanị ụfọdụ music faịlụ formats na Apple ngwaọrụ na ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye iPhone, iPad, iPod aka, Mac ma ọ bụ PC ọrụ mgbe ahụ ị ga-akpa imelite gị iTunes ka ọhụrụ version gaba eji Apple music n'elu ikpo okwu. Gị Mac ma ọ bụ PC ga nwere iTunes 12.1.2 na-enwe ike ime ka ojiji nke music n'elu ikpo okwu. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe emelitere version nke iOS nke bụ iOS 8.4 ma ọ bụ karịa.
Apple music ngwa bụ ugbu a ike na-agụ, tọghata na ide n'etiti MP3, WAV, AIFF, MPEG-4, AAC, na Apple Lossless formats. iTunes nwekwara ike igwu ọ bụla ọdịyo faịlụ nke QuickTime nwere ike igwu egwu ma na a na-agụnye echebe AAC faịlụ site na iTunes Echekwala na audible.com akwụkwọ ọdịyo dị. Ọzọkwa, ị ga-mara na e nwere mmachi nkwado maka FLAC na Vorbis nchọ na Ogg akpa.
E wezụga importing CD n'ime iTunes Ọbá akwụkwọ, ọrụ nwekwara ike mbubata dijitalụ ọdịyo faịlụ site isi mmalite ndị ọzọ na ụdị ọ bụla nke format nke iTunes akwado.
Nkebi nke 3: Best music format converter- TunesGo
TunesGo si Wondershare bụ ikpo okwu nke na-enyere gị jikwaa media ugbu na gị iOS ngwaọrụ ma nyefee ya site n'otu nke ọzọ enweghị na-aga site iTunes. Nke a n'elu ikpo okwu na-ahapụ gị download music na tọghata ya ndị ọzọ formats-akpaghị aka.
a) Akụkụ nke TunesGo
Nke a n'elu ikpo okwu ngwa ngwa na-ebupụ nile di iche iche nke faịlụ gị na kọmputa na-emepụta a ndabere nke mere na ị na-adịghị ka nchegbu banyere ụdị ọ bụla nke data ọnwụ.
Ọ na-enye free ikpe mbipute na ị nwere ike ịzụta a zuru akwụkwọ ikike nke ya na $39.95.
Ọ bụ dakọtara na iOS 8 ma na-akwado iPhone6 ​​na niile nsụgharị rue iPhone 4S. Ọ bụkwa dakọtara na iPod aka 5, iPod Nano, iPod kpochapụwo, iPod Obere, ọhụrụ iPad.
Nke a na usoro nwekwara ike akụta ọ bụla duplicates na na mbipụta faịlụ ndị na-adịghị ugbu a na ị na-aga n'ọbá akwụkwọ.
A na ngwa ma ọ bụ n'elu ikpo okwu pụrụ inyere gị aka wughachi gị dum iTunes n'ọbá akwụkwọ gị iPhone, iPod na iPad, bụrụ na ị tara ahụhụ ụdị ọ bụla nke a na usoro okuku ma ọ bụ ọdịda.
b) Webata otú ka lekwasịrị music usoro maka TunesGo
TunesGo-enyere onye ọrụ ịgbanwe faịlụ format ndị na-ahụ nke na-akwado site na ha ngwaọrụ. The ugwo ndenye aha nke TunesGo na-enyere gị ịtọ lekwasịrị music format dị ka MP3 ma ọ bụ MP4 mere na ndị niile faịlụ na-echekwa otu usoro. N'okpuru ebe nyere bụ nzọụkwụ ka lekwasịrị format:
Step1: On n'ụlọ peeji nke software, gaa na nhọrọ nke Ntọala.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a emeghe Mmasị nhọrọ na-aga Download taabụ
Nzọụkwụ 3: Ugbu a otu nhọrọ maka mwube ndabara Download ga-apụta site na nke mkpa ka ị họrọ si MP3 ma ọ bụ MP4 ka deafulat nhọrọ. (screenshot egosi MP3 dị ka họrọ nhọrọ). Enweta na OK n'ịkwado nhọrọ.
Ịzụta Musical Ngwaahịa n'ụzọ dị mfe site Music Instrument Store Online
Best Music Ọhazi maka iTunes / Windows na Mac OS X
> Resource> Music> Apple Music Format na Devices Ịgba